FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHEPWEILER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shepweiler
Alika mpiompy alemanina / Rottweiler mifangaro
'Ity no Shepweiler Marshall antsika. Alika mpamonjy voina 2 1/2 taona avy any West Virginia izay vao noraisintsika tamin'ny volana desambra lasa teo tao amin'ny fialofana any Niagara Falls. '
Ny Shepweiler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Mpiandry Alemanina ary ny Rottweiler . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Jeff the Shepweiler (Rottweiler / Shepherd mix) ho alika kely amin'ny faha-6 volana mijoro eo amin'ny dabilio park- 'Tena mavitrika i Jeff. Tiany ny mieritreritra fa voafehiny ny zava-drehetra ary izy no sefo . Mahery Izy, manaikitra mafy ary mivovo matetika ary tia mihazakazaka. '
Toby the Shepweiler amin'ny faha-4 taonany— 'Toby dia alika iraisam-pirenena! Mipetraka any Hong Kong izy izao, saingy kanadiana avonavona. Izy no ohatra tonga lafatra amin'ny 'goavambe malemy fanahy' ary hipetraka am-paharetana ary ny ankizy izay zara raha mahatratra ny lohany dia mamihina azy ary manintona ny sofiny. Ny hetsika ankafizin'i Toby dia ny milomano, mandeha fitsangantsanganana lava ary manenjika ireo kilalao tiany indrindra, vato. Izy no alika marani-tsaina indrindra ary manana teny maro izay azony fa akoho ny lohany rehefa mihaino anao miteny ianao, amoron-dranomasina, sakafo hariva, fitsangatsangana ary zavatra hafa mety tianao holazaina aminy, dia mailo be izy. '
'Manana volom-borona lava mahafinaritra ao ambadiky ny sofiny i Toby ary mihombo izy rehefa avy lena, na raha mandomando tokoa ety ivelany-tahaka ny volon'ny olona! Manana ny vatan'ny alika be izy, nefa toa mieritreritra fa bitika kely izy rehefa mitsambikina handry eo am-pofoanao isaky ny maniry. Manana fahazarana hafahafa izy, isaky ny maheno feon'amponga izy dia hihazakazaka mankeny amin'ny lavarangana ary hidradradradrana mandra-piavin'ny lavitra loatra ny feon-tsofina azony. Ary koa, raha mandry izy ka mahita anao manatona, dia mihodina eo an-damosiny avy hatrany izy miaraka amin'ny fanakanana tanteraka! Izy dia malefaka lehibe ary ny fianakavianay manontolo dia tena tia ny bera fuzzy lehibe! '
Rocco the Shepweiler toy ny alika kely amin'ny 2 volana— 'Rocco dia alika tsara, tena manan-tsaina, mahery fo ary vonona hilalao foana. Mety tsy madio izy, fa izy no alika tsara indrindra mety hananantsika. '
Kasey Mae the Shepweiler (Rottie / Shepherd mix) ho alika kely amin'ny 5 volana any an-tokotany.- 'Ny renin'i Kasey dia AKC Rottweiler ary mpiara-miasa amin'ny alika mpiandry alemanina mpiompy alemanina. Ny mifangaro dia alika mpiambina / mpiompy manana endrika tsara, ati-doha ary fanoloran-tena! Io fitomboana tsy nahy io dia mitombo laza. Heveriko fa rehefa mihazona ny fahaizan'ny olona sy ny toetran'ny fifangaroana ny be sy ny maro dia azoko antoka fa ho karazany vaovao eo an-dàlana io. '
Kasey Mae the Shepweiler toy ny alika kely amin'ny 6 herinandro mipetraka eo ivelan'ny fiara.
Layla the Shepweiler toy ny alika kely amin'ny 3 volana mitafy fehiloha mena.- 'Izaho sy ny sakaizako dia nitady alika lehibe mahafinaritra sy be fitiavana. Farany nahazo an'i Layla, ny mix Rottweiler / Shepherd anay avy amin'ny fialofana any Los Angeles. Telo volana izy tamin'izahay naka azy ary nampiaraka ny rahavaviny. Te haka roa izahay fa efa nanana alika roa hafa. Mihalehibe haingana dia haingana izy isan'andro. Layla dia manana ny angovo rehetra eto amin'izao tontolo izao ary tia milalao sy mifanerasera amin'ny zavatra rehetra ary na iza na iza mifanena aminy. Tiany ny matory eo anelanelantsika, saingy hijanona tsy ho ela izany rehefa lasa alika lehibe izy. '
Meika the Rottweiler / German Shepherd mifangaro amin'ny 2 taona— 'Meika dia manana toetra manintona ny fonao. Tena mpankato izy ary tia milalao baolina. Ny zavatra mahatsikaiky indrindra hitako nataony dia raha manana fantson-drano ianao dia hanandrana misambotra ny rano rehefa misidina eny amin'ny rivotra. Hanao izany tontolo andro izy raha avelanao izy. Ity sary ity dia taorian'ny fotoana nahafahany nilalao tsara. '
Ylee the Rottie / GSD amin'ny maha alika kely anao tokony ho 3 volana atory amin'ny ahitra
pyrenees volamena lehibe retriever mifangaro alika kely
Reese ilay mix Rottweiler / Shepherd alemanina amin'ny 2 taona mandry amin'ny sofa
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Shepweiler
Sary Shepweiler 1
sarin'alika alika kely anglisy anglisy
Mini dachshund Cocker spaniel afangaro
sisin-tany terrier jack russell mix
amerikana bulldog labrador retriever mix
fifangaroan'ny dane st bernard mahafinaritra
lhasa apso border collie mix